Hawaii ọ dị mma maka ịgba ịnyịnya ugwu? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ugwu ugwu nke ugwu hawaii - ajuju ndi ajuju
Ugwu ugwu nke ugwu hawaii - ajuju ndi ajuju
Hawaii ọ dị mma maka ịgba ịnyịnya ugwu?
ọgba tum tum? Yep. N'agbanyeghị na ọ dị obere na ebe dịpụrụ adịpụ site na ọmarịcha ebe ọ bụla ọzọ na mbara ụwa, ịnọdụ ala n'etiti oke osimiri anyị kachasị ukwuu,Hawaiibụ n'ezie bụghị naanị paradise n'ozuzu, ma paradise kpọmkwem n'ihiugwu igwenakwa.03.14.2017
Echi ọ ga - abụ ogo 7 - nke ahụ bụ -14 ogo. Ọ dabara nke ọma, Agaghị m anọ ebe ahụ, igwe kwụ otu ebe agaghịkwa m. Anyị na-aga ebe na-ekpo ọkụ.
Iji tinye ịnyịnya ígwè m n’ime akpa a dị nro, m na-ekpochapụ wiilị, ụkwụ na aka ndị nwere ike ịdọpụ ma ọ bụ kegide ha n’ime ime ahụ. Akpa ndị a adịghị ọnụ ala, mana ha abụghịkwa igwe kwụ otu ebe. Enwere m ike iji ya bugara m akụrụngwa m niile.
N’aka ndị ọkachamara, enwere m ike ijide n’aka na a ga-eji nlezianya lekọta ịnyịnya ígwè m na akụrụngwa m, dịka akpa ọ bụla ọzọ enyocha. Airlineslọ ọrụ ụgbọ elu nke America na-ebo $ 150 ụzọ ọ bụla maka ihe ùgwù nke ịhapụ ịnyịnya ígwè m na nkwupụta ibu, na m ga-agbazite ụgbọ ala nwere ike iburu ya. Naanị otu ụbọchị ịnya ịnyịnya, enweghị ozi a pụrụ ịdabere na ya n'okporo ụzọ na ikike ịrụ ọrụ, enwere m ike ịme ihe a niile n'efu.
brooklyn igwe kwụ otu ebe
Ọbụna ma ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, ịnyịnya ígwè m nwere ike ifu, zuo ohi, ma ọ bụ gbajie. Oge ga-agwa. Enwetara m ozi na igwe kwụ otu ebe m furu efu - n'ezie.
Mana mgbe mụ na ụlọ ọrụ ụgbọelu nọrọ oge ụfọdụ na ekwentị, achọpụtara m. Ọ bụ n'akụkụ nke ọzọ nke ọdụ ụgbọ elu ahụ, na-anọdụ na ụgbọ ibu. Echere m na m kwesịrị ịkọwa na m nọ na Kauai maka agbamakwụkwọ enyi m.
Ọ bụ agwaetiti kachasị dị na Hawaii site na mmiri, na amaghị m banyere ya mgbe m rutere ebe a. Ọ bụ otu n'ime ebe mara mma m gara. Ọ dị ka kalenda.
Kwa ụbọchị ị na-ahụ egwurugwu - ọtụtụ egwurugwu na ala ndị na-adịghịdị adị n'ezie. Na Kauai bụ paradaịs maka naanị ndị mmadụ. Maka echiche dị ịtụnanya ị lere, ị ga-ahụ ma ọ dịkarịa ala otu puku n'ime ụmụ okorobịa a na-akpa oke ọkpa a na-akpọ ọkụkọ ọhịa.
Adị m njikere ịkụ nzọ ha na-atọ ka ọkụkọ. E wezụga ebe ndị mara mma na anụ ọhịa, Kauai dị ka ala mmiri, nwere okporo ụzọ, okporo ụzọ, ụlọ ahịa, yana ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe. Nke a mere ka ọ dịrị m mfe izute Minh Hai site na Kauai Cycles.
Ọ maraworị onye m bụ ma ọ ga-enwere onwe m n'otu ụbọchị ahụ m chọrọ ịkwọ ụgbọala. Minh Hai ọbụna nwee ike ịhazi mgbazinye maka enyi m Nick. O doro anya na anyị achọtala nduzi.
Minh Hai maara n'ezie ebe ntụrụndụ dị. Maka onye ọ bụla wuru ụzọ a dị ịtụnanya. M na-ekwe nkwa na agaghị m agwa onye ọ bụla ebe ọ bụ.
Mana ọbụlagodi na achọrọ m, enweghị m ike. Onweghi ihe akara na Kauai akara, enweghị map njem, ma ejighi m n'aka ihe anyị kwesịrị ma ọ bụ ihe anyị kwesịrị ịnya. Enweghị Minh Hai anyị gaara efu ụzọ.
Obodo igwe kwụ otu ebe dị na Kauai bụ naanị ihe dị ka ndị na-agba 50, ha enweela ike ịkpụ ntakịrị paradaịs n'ime paradaịs a. Ga-ama mma. Ọbụghị naanị na ebe ahụ dị ka akwụkwọ ozi, mana unyi dị ka ngwakọta chocolate na-ekpo ọkụ kwa.
O nwere ike ịbụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị edo edo na anya na-adịghị ọcha m hụtụrụla. Enwere m ike iri ya. Emeela m.
Banyere otu ụzọ ụkwụ, ihe dị mma dị mma. Ezigbo mma. Have ga-arụrịrị ọrụ maka ya, agbanyeghị, ebe enwere ọtụtụ nsogbu na mgbada n'okporo ụzọ Kauai, enwerekwa ọtụtụ ngwongwo moto nwere ike ịtọ ụtọ.
Minh Hai werekwa anyị na ịnyịnya mmiri XC na mmiri nke izizi nwere obi abụọ mana na njedebe anyị hụrụ ụfọdụ ihe echefu echefu. Ọwara a dị n'etiti. O mejuputara oke ohia a - buoys nke suru mmiri site na Japan.
Ebe ọ bụ na anyị hapụrụ n'isi ụtụtụ, anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ntụpọ n'otu ụbọchị. Nke a bụ eziokwu n'agbanyeghị na ị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị naghị aga ngwa ngwa karịa 40 kilomita kwa elekere na Kauai. Ọtụtụ mmadụ nọ n’ebe ahụ, ha niile nọkwa n’otu okporo ámá.
Akụkụ pụrụ iche nke Minh Hai gosipụtara m: Oghere dị na mmiri nke zoro n'ime ọhịa. Enweghị m ịhụ ya, amaghị m ihe m na-abanye na ya. Ma mgbe anyị tufuru oriọna ahụ, oghere ahụ na-asọ asọ bụ nnukwu ụzọ isi kwụsị njegharị anyị; Mgbe mgbazinye ụgbọ ala na ụgwọ akpa, ejiri m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 1000 na ohere ịnya ịnyịnya ígwè na Kauai.
Naanị m gara ebe ahụ n'ihi enyi m John, onye maara ihe nke kpebiri agbamakwụkwọ agwaetiti dịpụrụ adịpụ site na echiche nzuzu bụ ebe ncheta kachasị eto. Ekwesịrị m ịga na ndozi enyi m kachasị mma, m ga-aga ebe ọtụtụ ndị anaghị enweta ohere. Na-agba ịnyịnya ígwè nke m pụtara na m nọ na egwuregwu m.
Site na omuma nke Minh Hai, enwere m ike iri ezigbo nri. Ndị njem nleta agaghị anwale. Ikekwe anyị nwere ike iji Minh Hai gaa mba ọzọ.
Ya mere, mgbe m chịkọtara igwe kwụ otu ebe m maka njem ogologo njem n'ụlọ, enwere m mmetụta na ọ bara uru ọ bụla: ụgwọ ya, nsogbu na ihe egwu dị na ya, naanị otu ụbọchị n'okporo ụzọ. Dị ka oge niile, ị na-akwụ ụgwọ maka ncheta. Mahalo.
Aga m ahụ gị oge ọzọ.
Gini mere o ji di ize ndụ ịgba ugwu n’elu ugwu?
Ọkpụkpụ, ọgbụgba, ọbara ọgbụgba, mmebi akụkụ ahụ, yana ikpe nke quadriplegia bụ ụfọdụ mmerụ ahụ dị oke njọ. Ibute ya n’ọnọdụ ya na stats si ski na-egosi iheihe ize ndụ:Mgbadaski nwere ruru a ihe 1 mmerụ kwa 1,000 ski.Mgbadandị na-agba ịnyịnya ígwè na-ata ahụhụ 1 mmerụ ahụ n'ime ndị ọgba tum tum iri.02.23.2016
Nabata ndị mara mma. Ma maa ebe anyị nọ - Whistler. - Ee! - Ọ bụrụ n ’ịnọ ebe a mbụ, ị ga-amata echiche ahụ.
nri nri nitrate
Ikekwe ị nọ ebe a na-ewere selfies dị ka anyị mere. - Anyị mere. (Igwefoto igwefoto pịa) - Ee, ma taa, Blake, anyị na-agba ịnyịnya igwe mgbada - Anyị bụ - Ọ bụ oge izizi m rutere otu n'ime ogologo oge, nwee nnukwu ọ excitedụ - Ee, ee, ọ dị mma ịhụ gị na ndagwurugwu igwe kwụ otu ebe ọzọ - M 'hụrụ ya n'anya.
Mana maa ihe, ọ bụ ụdị ngwakọta nke ndị na-ebuli elu. E nwere ọtụtụ nzọ ụkwụ na enduro anyịnya igwe n'ebe ahụ. Ọ bụghị dị ka ọtụtụ downhill anyịnya igwe dị ka ọ dị na mbụ. - Ee, otu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70: 30 site na Enduro ruo Downhill. - Ma olee nke ka mma? - Oh, Neil, nke ahụ bụ esemokwu anyị ga-edozi taa.
Kedu nke ka mma, igwe mgbada ma ọ bụ igwe enduro? ) - Ikwu na, Neil! Aww! (Wheel hums) - Anọ m na-agba ịnyịnya Nukeproof, nke ọhụụ, ọmarịcha igwe mara mma. Igwe kwụ otu ebe na Sam Hill meriri n'ezie bụ Garbanzo afọ gara aga - ee. - 27.5 wiil.
Kedu ihe ị na-anya, Blake? - Ana m anya onye na-ebugharị m Canyon na ọmarịcha salmon a agba.- Salmon.- Nakwa 27.5, kwụ ọtọ site na igbe m tụgharịrị site na Mma ojii m gaa na nke a.- Freshies Abụọ.- Mm-hmm. - Oh, enweghị m ike ichere ịga, bịa. (jụụ music) - My Canyon ịgbalị nwere 29 inch wiil na 150 mm nke njem.
M na-eji oge ka ukwuu n’ụlọ m n’ịnyịnya ígwè a, arịgokwara m Andes Pacifico na ya; Igwe igwe Blake bu uzo Nukeproof Mega.27.5 nke nwere 165mm nke njem; Blake na-agba ịnyịnya Andes Pacifico na igwe kwụ otu ebe a ma na-agbagharị ya oge niile n'ụlọ na ogige igwe kwụ otu ebe .Mykeproof Dissent downhill nwere 190 mm njem na 27.5 inch inch.
Blakes Canyon Sender nwere 200mm zuru nke njem azụ ma na-agbakwa wiil 27.5. Ha abụọ dị nnọọ mkpa karịa enduro anyịnya igwe. (ngwa ngwa techno music) (bicycle squeak) Ihe di uku banyere igwe gbaturu agbacha bu na ha nwere ogologo njem ka ha nwee ike iguzogide nnukwu ihe.
Na mgbakwunye, ha dị ogologo nke mere na ha kwụsiri ike na nnukwu ọsọ, na ọtụtụ mgbaghara karịa. Oghere dị larịị na-eme ka ha dị mma maka ụzọ ụkwụ dị larịị. Ma ha anaghị eme ihe ike dị ka ihe egwuregwu enduro, na-esikwu ike mgbe ọ na-atọ ụtọ.
Naghị ụkwụ gị ụkwụ, naanị ruo na ibu ma gbakwunye ịgbagha nke nnukwu taya ndị a dị elu. Igwe eji agbada ala di ukwuu maka ịrị elu, mana ha anaghị agbanwe agbanwe dị ka igwe kwụ otu ebe na ịchọrọ ịrị elu. (jụụ Techno music) (ịnyịnya ígwè buzz) Enduro anyịnya igwe bụ na ha bụ Mkpa ọkụ, mfe ịtụgharị gburugburu na pedal nke ọma na ụzọ na ala n'amaokwu.
Really ga-ahụrịrị otu igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na ị nwere ike ịzụ igwe kwụ otu ebe na-aga n'ihu ebe ị na-enwetaghị otu mmetụta na igwe mgbada. Ihe dị ukwuu banyere igwe enduro bụ na ị nwekwara ike ịchọpụta akụkụ dị iche iche nke ogige igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na ị ga-arịgo nnukwu ugwu mgbe ahụ ị nwere ike ime ya na-enweghị nnukwu mbọ.
Ha dị mkpụmkpụ, agbanyeghị, na ịkọwa na ọ bụ obere mgbaghara, nke ahụ nwere ike ịgwụ ike na ogologo ụbọchị. Obere nke kwụsiri ike na nnukwu ọsọ ma ha enweghị ike iwe nnukwu ihe dị ka igwe kwụ otu ebe - Neil, ị maara gịnị? N'ụbọchị mmiri ozuzo dị ka nke a, ihu igwe ga-abata ma gafere ọtụtụ ụzọ na ụbọchị na ụbọchị .- Ee.- You mara, enwere m ahụ iru ala karịa igwe kwụ otu ebe .- know ma gịnị? Gịnị bụ ihe a, ụbọchị nke ise, ma eleghị anya? - fivebọchị nke ise, ee.- Ogwe aka m na-eche na ha na-agbagharị. - Ee.- Ha nwetụrụ ike ọgwụgwụ.
Na ee, nke a bụ n'ezie otu ụzọ ahụ m ji ịnyịnya ígwè enduro na-agbaga Garbanzo.- Ee.- Nke ahụ dịkwa mma, mana n'ezie ọ dị mma, dịka m kwuru, inwe obere ike gwụrụ.
Ee - mgbe ị nwere ike ndọda n’azụ gị, igwe kwụ otu ebe ọ na-adị njọ - ee - ee, ihe dị n’akụkụ mmiri ebe ọ dị ntakịrị ala, ebe ị na-agbanye igwe kwụ otu ebe, ọ dị ka enduro Ọ dị mma n'ebe ahụ.- ikpere m na-arụ ọrụ ike n'oge na-adịbeghị anya.
N'ụzọ ụfọdụ, ọ bụ ntakịrị ihe, n'ihi na anaghị m achụpụ ogologo oge. Ma n'ezie ọ bụ ihe na-atọ ụtọ - Ee, m hụrụ ya n'anya, m hụrụ ya n'anya. Ike na-agwụ m karị, ka ọ na-arịwanye elu, otú ahụ ka nkwusioru m na-adị. - Ee, 200 mm nke njem na-adị mma n'oge a. - Eeh. Ana m amalite ime ka ihe dị nro.
N'aka nri, anyị nọ na mkpari, mmiri, mkpọrọgwụ, ebe okwute, ọ na-abịakwute ya ma ọ dị mmiri mmiri, jụụ. - Ị dịla njikere? - jụụ. (ọchị) (wheel squeaks) (jụụ Tekno music) (ọchị) - Nke ahụ ka mma na enduro igwe kwụ otu ebe! Ninja Cougar, ọ bụ nnukwu ụzọ, ọ bụghị ya? - Super dị mma, dị oke ike, ọtụtụ ọmarịcha ụlọ akụ. - Ma m chere na m na-ahọrọ m enduro igwe kwụ otu ebe ebe - ee - nnọọ atụba n'apata a obere mfe - yep, mm-hmm, Mkpa ọkụ, ngwa ngwa, ọzọ agile na i nwere ike pedal ya.
Ọ dị ka tankị na-abịa ebe a - Ma ọ bụghị nke ahụ dị elu - Nah - Ya mere ị ga-ebu ọsọ gị gafee akụkụ ndị a - Kedu igwe kwụ otu ebe ị chere na ọ ka mma ma ọ bụrụ na ị nwere nnukwu abalị n'abalị ahụ? - Downhill bike.- Ee.- Ma mee ka ihe niile dị nro.- Ọ na-egosi na igwe kwụ otu ebe anaghị adị mma mgbe niile maka ihe niile, ọ dabere n'ụzọ ahụ.
Bikegbọ ala mgbada dị mma maka mgbago, teknụzụ, ụzọ ụkwụ siri ike yana nnukwu nmịcha iji banye nnukwu bumps. An enduro igwe kwụ otu ebe ga-aka mma maka ire ụtọ, na-asọ ụzọ na ụzọ ụkwụ na ụzọ ụkwụ na uko ọrụaka stof. Whistler bụ nnukwu ogige igwe kwụ otu ebe maka igwe kwụ otu ebe n'ihi na ọ naghị agabiga ugwu na obere ụzọ.
Mana enwere ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ nke Whistler nke na -adịghị nfe inyocha na igwe kwụ otu ebe. Egwuregwu enduro ka mma n'ebe ahụ. Egwuregwu enduro na-arụ ọrụ nke ọma, karịa nke ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa niile ebe igwe kwụ ala bụ ngwa ọrụ pụrụ iche.
N’ebe ụfọdụ n’ogige ntụrụndụ igwe kwụ otu ebe, ịnwe ike ịgbada n’elu ịnyịnya ibu adịghị mkpa ma ọ gafee oke. Yabụ ihe niile dabere na ebe na ihe ị na-anya. Echere m na erere m na igwe kwụ otu ebe na ogige igwe kwụ otu ebe - Ọfọn, ọ ruru ebe anyị abụọ chọrọ igwe kwụ otu ebe na ngwụcha - Whistler ọkachasị - Ee - a hụrụ m ya n'anya, ọ dị mma .- Ee ọ dị , enwere oke mgbe ị ga-ezuru ogige ahụ ma ịchọrọ n'ezie ịpụ ma chọpụta ụzọ ndị ọzọ dị ka ụzọ ndị ọzọ dị na ndagwurugwu ahụ.- Ee.- could nwere ike, ị maara, igwe kwụ otu ebe nwere ike ime ya niile - Nke a bụ nnọọ eziokwu. - Ọfọn, amaghị m.
Ma echere m na Downhill na-agba ịnyịnya ígwè n'ogige ahụ - Ee, nwekwuo ụkwụ, ị pụtara? - Ee, ee - Nri ehihie, obere okirikiri - 100%. ogige, dị ka Ọchịchịrị Crystal, pịa ebe a maka njem a. Chefuo na ọ gaghị akụ ụwa na ịdenye aha n'ihi na ị tụfuru ụfọdụ ihe nzuzu! - ee! - na anyị ga-ahụ gị mgbe e mesịrị ndị mara mma.
Neil? - Ee - a ga m esoro gị ụzọ ruo ụlọ oriri na ọ favoriteụ favoriteụ kachasị amasị anyị - Ee - you mara ebe nke ahụ dị? - Moguls? - Gini mere ee, o doro anya.
Ego ole ka ndị na-agba ugwu na-akwụ ụgwọ otu afọ?
Yabụ, ebe 51.65% nke ndị na-agba ịnyịnyairiteihe na-erughị $ 20,000 USD, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nkemakandị na-agba ịnyịnyakwụọ ụgwọihe karịrị $ 40,000 USD kwaafọna ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọiriteihe karịrị $ 50,000 USD.04.05.2021
Nabata ndị mara mma. Know mara na ajuju ajuju a otutu. Nke ahụ pụtara na olee otu ị ga - esi bụrụ ọkachamara? Kedu ka ị si arụ ọrụ kachasị amasị gị? Chee echiche, taa bụ ụbọchị gị.
Aga m enye gị akwụkwọ, ụkpụrụ maka etu esi aga pro. Soro m. (egwu obi ụtọ) Na mbụ ịmalite ịgba ịnyịnya ígwè, ị ga-enweta ihe ka mma ma ọ bụrụ na ịrapara ya.
Dị mfe ma ọ na-enyere aka. Thezọ kachasị mfe iji kọwaa nke a bụ site na ịnya ọtụtụ, ka ị na-agba ịnyịnya, ka ị na-amụkwu Gị. N'ezie, nke ka mma ị ga-enweta.
Ọganihu bụ isi. Lekwasị anya n’ihe ị chọrọ. Mgbe ọ ruru unyi jumping, downhill, XC, enduro, biking road, ihe niile.
Mana ihe bụ isi bụ na ihe ị na-eme na-atọ gị ụtọ. N'ihi na nke ahụ ga-ejupụta gị na ọrụ gị na-arụ ọrụ) Ya mere, ị na-agba ọsọ nke ukwuu ma chọọ iru n'ọkwa ọzọ. Kedu ka ị chọrọ ime nke ahụ? Kedu ka ị ga - esi mee ka nka gị ka mma? Aga m egosi gị otu ịkwado si dị mma mgbe niile.
Ọ dị mma igosi nka gị. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị gosipụta onwe gị na mgbasa ozi ọha na eze, kpoo ihe osise ederede dị jụụ, tinye ha ọnụ, ma mee ịkpụ ụkwụ. N'oge a ị nwere ike iche na mmadụ na ọ bụ nnukwu ọrụ, gịnị kpatara m ga-eji na-eme nke a? Ee, ee, ee, ọ ga-abụ ihe siri ike dịka m kwuru na mbido, ịchọrọ ntọala dị mma iji wulite ọrụ gị ọbụlagodi ebe ahụ, ga - enyere gị aka ịchọta na ụwa ịgba ọsọ, nke na-adọrọ uche gaa n'ụgbọ ịnyịnya ígwè ma ọ bụ na radar ha nke dị mma.
Ọzọkwa, ihe ị ga-eme bụ ikpori ndụ na igwe kwụ otu ebe. Breeki na-ada ụda) Ọ dị mma, mgbe ọ na-agbapụ otu isiokwu maka mgbasa ozi mmekọrịta, ịkwesighi ịpụ dọlaa nnukwu igwefoto ịgba otu edemede. Ihe ị ga - eme bụ ịse ya na igwefoto ndị a.
Na-ebu gị mgbe niile. Ma igwefoto dị na ekwentị taa bụ ara. Nwere ike ịme ọtụtụ.
Amaara m ndị egwuregwu Britain ole na ole na ihe ndị ọzọ? mee njem na mba ofesi ebe nile, mee oru site na ime ka ndi enyi ya see ya n’ekwenti ya, gbue ya onu ngwa ngwa, lelee ya na soshal midia; na-enweta ọtụtụ echiche, ihe niile dịka nke a wee bido Nke a bụ ụzọ iji chọpụta. Ọ bụrụ na ịchọọ asọmpi, bụrụ kpakpando mgbasa ozi mmekọrịta. (Joy music) oge asọmpi.
Ọ bụrụ na ị na-asọmpi na ị na-aga ihe omume ụfọdụ iji nweta nsonaazụ, e nwere ụzọ abụọ ị ga-esi gbagoo ọkwa ụlọ ọrụ iji bụrụ ọkachamara na nke ahụ bụ, chọpụta ihe omume mpaghara ị nwere nọ gị nso, ma tinye ha. a oké ụzọ iji nweta ụfọdụ ahụmahụ tupu ị izute nnukwu ndị si n'ebe. Hel, ọ bụrụ na m chọrọ ịkwado ma nweta igwe kwụ otu ebe m nwere onwe m, m ga-edebanye aha pro.
Ya mere, agara m asọmpi mbụ m na m bụ onye nọ n’okpuru wee banye n’elu. Enwetara m nke atọ n'azụ Sam Pilgrim na oge ahụ na oge ọzọ m bịara na-esote ihe omume, aga m abụ onye nkwado mbụ m. Ma nke ahụ dị na ịwụli unyi, ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ịnyagharị n'okporo ụzọ ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ, ị ga-agabiga otu edemede iji nweta isi iji nweta ebe ịkwesịrị ịdị.
Hel, nke ahụ bụ otú Neil si mee ya. Ọ ghaghị ịrụ ọrụ site na edemede iji nweta isi, ịbanye na otu otu, ịghọ pro. Na ihe niile akwadoro, eserese (na-anụ ụtọ) ma ị nweta nsonaazụ, ị ga-ahụ ụdị ole na ole na-akụ aka n'ọnụ ụzọ gị na azụmahịa ole na ole n'aka, ee, ọ bụ mmalite. (egwu obi uto) Naanị na ị nwere nkwekọrịta apụtaghị na ị ga-anọdụ ala zuru ike.
I kwesiri iche echiche ugboro abuo. (egwu obi ụtọ) have ga-anọgide na-eme ya. Ee, nke ahụ ka m ji ụkwụ m na-ekwu maka gị.
Pụọ! (Ngwongwo igwe kwụ otu ebe) (brek mkpọtụ) Mana ị gaghị ebi naanị na ngwaahịa efu. E nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ n'ime usoro na ị chọrọ iji mezuo elu. Na mgbe ihe niile mere, ị na-amụta.
Learn mụtara ahịa, ọrịre, ọdịdị mmadụ, atụmatụ, eserese, ihe niile na-eme na gị amaghị m. Na naanị n'ihi na na njedebe nke ụbọchị naanị na ị chọrọ nwere fun na gị igwe kwụ otu ebe. Mana ọ na-ewe obere mgbalị.
Na mbido, ị nwere ike nweta ngwaahịa, nke dị mma, ọ na - enyere aka nke ukwuu ma a bịa n'ịkụpịa akụkụ ole na ole na igwe kwụ otu ebe gị. Nwere ike dochie ha na ndị nwere onwe ha na-enweghị igwu ala n’akpa gị ma kwụọ ụgwọ maka ya. Ma ọ dịghị nke a bụ n'efu.
Ọ ga-abịa site n'aka onye. Ikwesiri igba mbọ hụ na ị na-akwado ndị na-akwado gị obi ụtọ n'ihi na ị ga-ahụrịrị na ị bụ ezigbo ego maka ha. Ya mere, na-eme ihe ị na-eme.
Na njedebe nke ụbọchị ị nọ ebe ahụ n'ihi na ị hụrụ ya n'anya. Are nọ n'ọnọdụ dị mma. You nwere obi ụtọ ma chọọ ịnabata mmetụta ndị ahụ iji gaa n'ihu, iji mezuo ihe ịchọrọ ịme na njedebe nke ụbọchị, ịgba ọsọ ugwu ugwu ma ọ bụ egwuregwu ọ bụla ị na-eme.
Ugbu a, ọ na-akpọghachite m ịnụ ụtọ na igwe kwụ otu ebe gị. Na-ekpori ndụ mgbe niile. Ma, agaghị m agha ụgha.
Agaghị m agha ụgha. Ọ bụ ọrụ na njedebe nke ụbọchị ma mgbe ụfọdụ enwere ụfọdụ ihe na ọrụ ahụ nke ị kpọrọ asị na ị chọghị ime. Bọchị ụfọdụ ị chọghị ịga n'ihu mana agbanyeghị, ụbọchị izu ike, ihe ọ bụla, ị laghachiri igwe kwụ otu ebe ma ị ka hụrụ ihe ị na-eme n'anya.
Na na na, mgbe niile na ọ na-ada ka ike ọrụ na ee ọ bụ ike na-arụ ọrụ ma ọrụ ike na-akwụ ụgwọ. Naanị chee na gị onwe gị bụ ụlọ ọrụ n'onwe gị. Aha gị bụ ụlọ ọrụ gị.
Wantchọrọ iwu ụlọ ọrụ a ka ị nwee ọganiihu. Na nke ahụ bụ otu ihe ahụ dị ka ịkwado ma na-akwado ma na-abụ pro Enwere ọtụtụ ọrụ siri ike na ya. Achọrọ m ịnweta igwe kwụ otu ebe n'efu.
Ya mere echere m, damn ya, m ga-eme zoo. N'ihi ya, m mere asọmpi, abịara m n'elu n'ihi na amaara m na nkà m dị mma n'oge ahụ, mana ọ na-akwụ ụgwọ mgbe ọ bara uru. Ma mgbe ahụ, m gafere n'ọkwá.
Abịara m na FMB, erutere m n’elu FMB, ọ bụghị ọnụ ọgụgụ nke mbụ, mana erutere m ebe m nwere ntụsara ahụ, ebe achọpụtara m ọzọ ka ụlọ ọrụ ndị ọzọ wee hụ na m nwere ike ibido ịkwalite ụlọ ọrụ ndị m na-anya. Nke ahụ bụ ihe ahụ, ị ​​nweta ihe n'efu, mana ọ bụghị n'efu. Ikwesiri ịrụ ọrụ maka ya.
Havekwesịrị ịkwalite ngwaahịa ndị ị na-anya maka. N’ebe ahụ ka ọrụ niile a siri ike si abịa. Ọ naghịkwa akwụsị akwụsị.
Egwu igwe kwụ otu ebe
Nweghị ụbọchị ezumike. Kind nwere. Nwere ụbọchị ma ọ bụ abụọ ezumike.
Ma nke ahụ bụ ya. Agara m ebe niile wee malite igwu ala na mgbasa ozi mmekọrịta. Amalitere m ịrụ ọrụ na mgbasa ozi ụwa ebe mụ na ọtụtụ ndị na-eme ihe nkiri na-arụ ọrụ n'ebe ahụ.
Ezigbo ndị enyi m, ezigbo ndị enyi taa, amalitere m iso ha na-arụ ọrụ, malitere ịme ọdịnaya ederede dị mma yana amalitere m, amalitere m ime ya n'onwe m, amalitere m ịse onwe m, nwute ya, ọbụnadị m malitere ọwa nke m wee abiara m gmbn ebe m jiri amamihe ndia m muta ihe kariri m wee weta ha ebe a ma mu na ndi mmadu di uku na aru ma mu ka na aru oru m. Na m na-aga ụwa ma ọ dịghị mfe. Ọ bụ ọrụ siri ike.
Olileanya na ị ụtọ isiokwu a. Olileanya nke ahụ nyere gị ntakịrị nghọta, obere ụkpụrụ dị ka ndị dị otú a, dị ka ịghọ pro ma ọ bụ ihe ọ dị ka ịbụ ihe akaebe na otu o siri sie ike. Ọ dị ka anyị na-ebi ndụ.
Ọ dị ntakịrị. Mana ọ na-abịa site n'ịrụsi ọrụ ike. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịrapara na ya wee nwee ụbọchị na ndụ nke pro pịa ebe a, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ka ọdịnaya dị jụụ karị echefula ịdenye aha na ụwa n'ihi na ị na-efu ụfọdụ nnukwu ihe.
Nye anyị mkpịsị aka aka ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị ga-aga pro.
Ugwu ugwu na-agbada?
Mgbadaịnya ịnyịnya bụ, nke mbụ, nnukwu adrenaline. Ọ bụ ịdọ aka ná ntị ya, ezigbo ọ ,ụ na ọ bụ isi ihe dị na yaọgba tum tum. Ndị na-apụ apụ n'egwuregwu ahụ na-elekarị ya anya ka ọzụzụ kachasị mfeọgba tum tum(n'ihi na ike ndọda nwere ike ịrụ ọtụtụ ọrụ), nke a abụghị eziokwu.
Kedu agwaetiti Hawaii nke nwere igwe kwụ otu ebe kachasị mma?
Ugwu Ugwu- Oahu
Oahunwerekasị mepụtaraọgba tum tumụzọ ụkwụ na niile nkeisuo, nakacha mmaakara na ụzọ ụkwụ maka ọkwa ikike niile.Jul 19 2018 Nov.
Hawaii ọ dị mma ịgba ígwè?
Cygba ígwèn'imeHawaii.Cygba ígwèn'imeHawaiibụ otu n'ime ụzọ kachasị atọ ụtọ iji chọpụta akụkụ a nke United States of America. Yabụ ị nwere ike ịchọta nke zuru okeHawaii igwe kwụ otu ebeịnyịnya, anyị na-enyocha anyị zuru collection nkeịgba ígwèụzọ gasị na mpaghara ahụ iji nyefee 17 kacha elu.
Ugwu a na-agbago ugwu ugwu ọ bụ ezigbo mgbatị?
E bipụtara na Journal of Sports Sciences na Ọktọba, ọ chọpụtara namgbada mgbadajikọtara ya na usoro mmụta ahụike dị mkpa nke na-eweta uru maka ogo ahụike mmadụ niile. “Otu n’ime ihe wụrụ m akpata oyi n’ahụ́ bụ na ọ bụ ihe zuru ezurụpụta, ”Ka onye nchọpụta bụ Jamie Burr na-ekwu na ajụjụ ọnụ ekwentị. r.
Ọ dị ize ndụ naanị igwe kwụ otu ebe?
Ee, enwere ụfọdụ ihe egwu pụta ụwaugwu biking naanị, n'agbanyeghị iji nlezianya kwesịrị ekwesị, ọ bụnchebe. Ọ na-abụkarị na nke migwe kwụ otu ebena-agba ịnyịnyanaanịna enwere m mmetụta kachasị nwee njikọ na okike na nke kachasị nwee mmasị ịkwụsị na ịmụmụ ọnụ ọchị na ịdị ukwuu nke ụzọ anyị naugwu.
Kedu onye na-akwụ ụgwọ igwe kwụ otu ugwu kachasị elu?
Aaron Gwin Na-akpata $ 1 Nde kwa afọ - SingletracksIgwe UgwuAkụkọ.Ọgọst 29 2017
Kedu ọsọ ọsọ ndị na-agba ugwu ugwu na-aga?
Kedu nkeziososonke onye XC-MTB? Mkpokọta nkeziososomakamakaọkaramakamgbagharị obodougwu igwebụ ≈ 9 mph (14.5).5bọchị 5 2020